onlineakhabar.com: Health Tips : राति सुत्दा अन्डरवेयर नलगाई सुत्नुका फाइदा,, लगाउँदा के के असर गर्दछ?
Health News, health Tips, Life Style, Underware » Health Tips : राति सुत्दा अन्डरवेयर नलगाई सुत्नुका फाइदा,, लगाउँदा के के असर गर्दछ?
Health Tips : राति सुत्दा अन्डरवेयर नलगाई सुत्नुका फाइदा,, लगाउँदा के के असर गर्दछ?
प्राय मानिसहरु राति सुत्नेबेला कट्टु वा अण्डरवेयर लगाएर सुत्ने गर्दछन् । तर स्वास्थ्यको लागि यो राम्रो नभएको डाक्टरहरु बताउँछन् । डाक्टरहरुका अनुसार हाम्रो शरिरका संवेदनशिल अंगहरुलाई रातमा कपडाबाट टाढा राख्नु ज्यादा फाइदाजनक हुन्छ । यसले इन्फेक्शनबाट बचाउँछ ।
पसीनाका कारण शरिरमा ब्याक्टेरियाहरु फैलने मौका पाउँछ । बिशेषगरी त्यो अंग जुन सँधै कपडाले डाकिरहन्छौ । यसको महिलाहरुको तुलनामा पुरुषहरुमा ज्यादा समस्या हुन्छ । जसले पुरुषहरुको प्रजनन क्षमता प्रभावित हुन्छ । न्यूयोर्कमा गाइनोकोलजिस्टको फिल्डमा काम गर्ने डाक्टर अनिसाले यसै बिषयमा एउटा लेख लेखेकि थिइन् । जसमा उनले जनाएकी छन् कि 'म सधैं आफ्नो बिरामीसँग भन्छु कि तपाई राति अन्डरवेयर बिना सुत्ने गर्नुहोस् ।'
उनि भन्छिन्, 'यदि तपाई संधै आफूलाई कपडाले बाँधीरहनुहुन्छ भने तपाईको पशिना सुक्न पाउँदैन । सँधै पशिनाले चिसो भइरहन्छ यस्तो हुँदा ब्याक्टेरिया हुर्कन र फैलनको लागि मद्द मिल्छ । जसका कारण स्किन इन्फेक्शनको आशंका बढ्न जान्छ । महिलाहरुमा यो समस्याले ज्यादै गम्भिर रुप पनि लिन सक्छ । यसको असर महिलाहरुको पिरियडमा पनि पर्नसक्छ ।
डाक्टर अलिसाका अनुसार, 'राति सुत्दा पुरै नाङ्गो भएर सुत्नु ज्यादै लाभदायक हुन्छ भने यदि जो व्यक्ति राति नाङ्गो भएर सुत्न सक्दैन तिनिहरुले कटनको कसिलो नभएको कपडा लगाएर सुत्नु पर्दछ ।' एक सर्वेका अनुसार ब्राजिलमा एउटा यस्तो सोसाइटी छ जहाँ १८ प्रतिशत महिला मात्र अन्डयवेयरको साथमा सुत्छन् । बाँकी सबै पूर्णरुपमा नाङ्गो सुत्ने गर्दछन् ।
Tags : Health News health Tips Life Style Underware